သတင်း - ကုန်ပစ္စည်းဘလော့ - အလုပ်လုပ်ဝန်ကန့်သတ်ချက်
အလုပ်လုပ် Limit ကိုအလုပ်လုပ်လျှောက်လွှာအတွက်အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ရုတ်ခြည်းသို့မဟုတ်ကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါစေအလုပ်လုပ်ဝန်ကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအလုပ်ကန့်သတ်.
မင်းကမင်းလိုအခြားဝေါဟာရတစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ Breaking Strength ၎င်း၏အခြေခံဆက်ဆံရေးကိုအောက်တွင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏
min ။ Breaking Strength = အလုပ်လုပ် Limit ကိုအလုပ်လုပ် x ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအချက်
ကွဲပြားခြားနားသော sceanario တွင်, လုံခြုံရေးအချက်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်:
ဥရောပတွင်လုံခြုံမှုအချက်သည် ၇ မှ ၁ ဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ရှိနေစဉ် ၅ မှ ၁ အထိဖြစ်သည်။
ဥရောပ၌, လုံခြုံရေးအချက်2မှ 1 ဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ရှိနေစဉ် ၃ မှ ၁ အထိဖြစ်သည်။
Work Load Limit (WLL) သည်သိုင်းကြိုးကိုရွေးချယ်သောအခါ Breaking Strength (BS) ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ WLL သည်ချိုးနိုင်သည့်စွမ်းအား၏ ၁/၃ ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဝန်တစ်ချိန်သည်အလေးချိန်သုံးဆတိုးလာလိမ့်မည်G-Forces လျှောက်ထားကြသည်.
မှန်ကန်သောကြိုးများကိုရွေးချယ်ရန် WLL = Cargo of Cargo ကိုပေါင်းစပ်ပါ
မှတ်စု: သင်၏ဝန်အမျိုးအစားအတွက်မှန်ကန်သောကြိုးအရေအတွက်အားအသုံးပြုရန်သေချာစေရန်ဒေသတွင်းဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုစစ်ဆေးပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောကုန်တင်အမျိုးအစားများသည်အနိမ့်ဆုံးချည်နှောင်မှုအရေအတွက်လိုအပ်နိုင်သည်။
WLL နှင့်ဥပဒေ / စည်းမျဉ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ အသုံးပြုသူသည်သူ၏ဝန်ကိုလုံခြုံစွာထားရန်လိုအပ်သောကြိုးအရေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
သင့်ရဲ့ဝန် 1,000 ပေါင်လျှင်။ ဒါကြောင့်ပေါင် 3000 ဖြစ်လာသည်။ G-Forces နှင့်အတူလျှောက်ထားခဲ့သည်။
500 ပေါင်နှင့်အတူ2ကြိုး။ WLL နှင့် 1500 ပေါင်။ ချိုးခွန်အား
250 ပေါင်နှင့်အတူ4ကြိုး။ WLL နှင့် 1000 ပေါင်။ ချိုးခွန်အား
Combined WLL = ကုန်ပစ္စည်း၏အလေးချိန် (၁၀၀၀ ပေါင်)
Combined BS = G-Forces လျှောက်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများ၏အလေးချိန် (ပေါင် ၃၀၀၀)